आध्यात्मिक सोच भएको व्यक्ति शासक हुनुपर्छ :: पासाङ तेम्बा लामा – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०८:४६ English
आध्यात्मिक सोच भएको व्यक्ति शासक हुनुपर्छ :: पासाङ तेम्बा लामा
चर्चित आध्यात्मिक बौद्ध धर्मगुरु पासाङ तेम्बा लामा लामो समयदेखि समाजसेवा एवम् राजनीतिमा समेत संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँको पहलमा विभिन्न विद्यालयको स्थापना हुनुका साथै अनेक सामाजिक कार्यहरूसमेत सञ्चालित छन्। राजनीति गर्ने व्यक्तिमा आध्यात्मिक सोच भए उनीहरू स्वतः इमानदार हुने र यसले राजनीतिलाई सही मार्गदर्शन गर्दै देशमा शान्ति र विकासको मूल फुट्ने उहाँको धारणा रहेको छ। यस्तै–यस्तै सद्विचारका साथ समाजसेवामा लागिपर्नुभएका बौद्ध धर्मगुरु लामासँग हाम्रा विशेष संवाददाता बुद्धिप्रसाद शर्माले गरेको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ:
० एक आध्यात्मिक धर्मगुरुको कोणबाट मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?
– नेपालको राजनीतिमा इमानदारिता भन्ने तत्त्व पटक्कै देखिएन। कसरी हुन्छ बिगार्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा विकृति अति नै बढेको छ। अनावश्यक रूपमा जातीयताको मुद्दा उछालिएको छ। यो बेठीक मात्र नभई अत्यन्त हानिकारक पनि हो। राजनीतिमा इमानदार नहुँदा विद्रोहले जन्म लिन्छ र यसले समाजलाई तहसनहस पार्छ। त्यसैले देश र जनताको भलो गर्ने हो भने राजनीति गर्नेहरू इमानदार रहनु पहिलो सर्त हो भन्ने मलाई लाग्छ।
० देशमा अशान्ति र अस्थिरताको अन्त्य भएको अनुभूति गर्न अझै सकिएको छैन, यस्तो अवस्थामा आमजनतालाई शान्तिको पाठ सिकाउन तपाईंजस्ता आध्यात्मिक गुरुहरूको भूमिका के हुन सक्छ?
– केटाकेटीहरूलाई विद्यालयबाट नै आध्यात्मिक ज्ञान दिनुपर्छ। मेरो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि विद्यालय स्थापना गर्नेदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ–संस्थामार्फत भगवान् बुद्धको सन्देशलाई सबैमाझ पुर्या्उने काम गरेको छु। नेता खराब भएर नै राजनीति दुर्गन्धित भएकाले मुलुकमा अस्थिरता र अशान्ति व्याप्त भएको हो। राजनीति सुधि्रनेबित्तिकै प्रायजसो समस्या हल हुन्छन् भन्ने लाग्छ। राजनीति सफाइको अभियानमा मेरोतर्फबाट के गर्नुपर्छ, परिस्थिति वा परिवेशअनुसार काम गर्न म त सधैँ तत्पर नै छु।
० तपाईं एक आध्यात्मिक गुरुका साथै विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापमा समेत संलग्न हुनुहुन्छ। हालसम्म्ा के–कस्ता सामाजिक कामहरू गर्नुभयो?
– सिन्धुपाल्चोकमा मेलम्ची ज्ञान मावि स्थापना गरेर करिब पाँच सय विर्द्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययन गराउँदै आएको छु। त्यस विद्यालयमा विदेशीको सहयोगमा करिब चालीस करोडको लगानी भइसकेको छ। यो विद्यालय मध्यमाञ्चलकै स्तरीयमध्ये पर्छ। काठमाडौंको बौद्धमा शान्ति विद्यालय सञ्चालन गरेको छु। सरोकार नेपाल भन्ने संस्थाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर विभिन्न सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा संलग्न छु। ल्ुाम्बिनी विश्वविद्यालयको बोर्डमेम्बर भएर यस विश्वविद्यालयको उन्नतिको कार्य गर्दै आएको छु। अर्को कुरा, लुम्बिनीमा ठूलो बजेट ल्याएर विकास गर्ने भन्दै हङकङबाट सञ्चालित माओवादी नेता प्रचण्डसमेत उपाध्यक्ष रहेको ‘एपेक्स’ संस्थालाई मेरो नेतृत्वमा कडा विरोध भएको थियो। सो संस्थालाई नेपाल आउन नदिन मेरो पनि भूमिका थियो। उक्त संस्थाको भित्री उद्देश्य लुम्बिनीमा विकास गर्ने नभई देशमा अशान्ति फैलाउने थियो भन्ने भित्री चुरो कुरो बुझेर मैले विरोध गरेको हुँ।
० तपाईं नेपाली काङ्ग्रेस सिन्धुपाल्चोकको एक वरिष्ठ नेता पनि हुनुहुन्छ। एकातिर तपाईं नेपालको राजनीति अत्यन्त दुर्गन्धित छ भन्नुहुन्छ, अर्कोतर्फ आफैँ राजनीतिमा संलग्न हुनुहुन्छ। यसलाई कसरी बुझ्ने?
– कुहिएको घरमा नकुहिएको वस्तु राखिँदा त्यसले त्यो घरलाई केही न केही सुगन्ध दिन्छ। राम्रो गर्दै गए ढिलोचाँडो त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ। यही सोचेर म राजनीतिमा लागेको हँु। राजनीतिलाई समाजसेवा र देशको भलो गर्ने साधनको रूपमा प्रयोग गर्दै सबैलाई बुझाउने कोसिस पनि गर्दै आएको छु। म्ा ०३६ सालदेखि नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेको हुँ। राजनीतिबाट मलाई कुनै व्यक्तिगत लाभ छैन। पहिला आफू प्रजातान्त्रिक बनौँ त्यसपछि मात्र देशमा प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने ठान्छु म। प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता र बुद्धदर्शन लगभग मेल खान्छ। यसकारण पनि म राजनीतिमा प्रवेश गरेको हुँ र समाजसेवा भयो भने राजनीति त्यसै सफा हुन्छ भन्ने मेरो धारणा छ। मेरो विचारमा राजनीतिको मुख्य उद्देश्य समाजसेवा नै हो र हुनुपर्छ।
० आजभोलि मानिसहरू धेरै नै स्वार्थी र आत्मकेन्द्रित हुँदै गएका छन्, समाजसेवामा उनीहरूको ओठेलगाव मात्रै छ, यस्तो हुनुको खास कारण के होला?
– सामग्रीहरूको सञ्चय गरेर शान्ति आउँदैन भनेर हामी आध्यात्मिक गुरुहरूले पनि आममानिसलाई अझै बुझाउन सकिरहेका छैनौँ। राजनीतिले सही किसिमले काम गरेर जनतालाई गाँस, बास र कपासको उचित व्यवस्था गर्न सकेको भएको भए समाजबारे अलि बढी सोच्न पुग्थे मानिस। गरिबीले गर्दाखेरि पनि मानिस आफूकेन्द्रित भएका हुन्। बुद्ध धर्मअनुसार दया, माया, क्षमा र करुणा भयो भने शान्ति स्वतः आउँछ। यसो हुनु भनेको मानिसहरू समाजप्रति वा अन्य मानिसप्रति सकारात्मक एवम् सहयोगी हुनु हो।
० नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित भएको छ। वास्तवमा राज्य र धर्मबीचको सम्बन्ध कस्तोे हुनुपर्छ?
– राज्यले सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। सबै धर्मका मुख्य धार्मिक स्थलहरूलाई राज्यको पूर्ण सहयोगमा व्यापक विकास गरिनुपर्छ। व्यावहारिक गुरुयोजना बनाएरै काम थाल्नुपर्छ। मुलुकमा महात्मा गान्धी, नेल्सन मण्डेला र दलाई लामाजस्ता व्यक्तिहरू नेता भएमा शान्ति, स्थिरता, विकास र मेलमिलाप स्थापित हुन्छ। देशमा सबै धर्मले फैलने मौका पाउनुपर्छ। राज्य अधार्मिक बन्ने होइन कि सबै धर्मलाई समान रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने हुनुपर्छ। आध्यात्मिक सोच भएको व्यक्ति शासक भयो भने राजनीति सफा हुन्छ र जनताले सुख पाउँछन्।
० तपाईंले पटक–पटक बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामालाई भेट्नुभएको छ। उहाँको नेपालप्रतिको धारणा कस्तो पाउनुभएको छ?
– उहाँ नेपाललाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ। भ्ागवान् बुद्ध जन्मेको ठाउँ र नेपाल–तिब्बतबीचको पुरानो सम्बन्धले गर्दा उहाँमा नेपालप्रति एकदमै सकरात्मक धारणा रहेको पाएको छु। नेपाल एक पवित्र एवम् आध्यात्मिक देश भएकाले यहाँका सबै नागरिक मिलेर बस्नुपर्छ भन्नुहुन्छ उहाँ।
० मुलुक नयाँ संविधानका लागि छटपटाइरहेको छ, आगामी माघ ८ भित्र नयाँ संविधान बन्लाजस्तो लाग्छ तपाईंलाई?
– नयाँ संविधान बन्ला जस्तो त लाग्छ, तर नेपालका नेताहरूको व्यवहार, सोच र प्रवृत्ति हेर्दा ढुक्क हुने अवस्थाचाहिँ छैन। नेपालका अधिकांश जनताले पनि नेतालाई विश्वास नगर्ने अवस्था पैदा भएको छ। यस्तो परिवेशमा त जे गरेर भए पनि समयमै संविधान ल्याउनैपर्ने हुन्छ। अन्यथा नेपालमा अशान्ति र अस्थिरता झन बढ्ने खतरा रहन्छ।
१८ भाद्र २०७१, बुधबार २२:१३ मा प्रकाशित